Coins.ph Wallet 3.3.58 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.3.58 လြန္ခဲ့ေသာ4ရက္က
Application မ်ား ေငြေရးေၾကးေရး Coins.ph Wallet
Coins.ph Wallet ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
NEW: REMIT FROM 200+ COUNTRIES THROUGH WESTERN UNION
• Easily send remittances from 500,000+ locations worldwide
• Claim your funds immediately in your Coins.ph wallet
• Easily buy load online using the Coins.ph app
• Get 10% REBATE when you buy load
• Buy prepaid load for international numbers in 100+ different countries
• 450 ATMs for instant cardless cash out (Security Bank ATMs)
• Electricity (Meralco, KLOADKuryente load, VECO, Davao light, PALECO)
• Government (NBI, SSS contributions, Pag-IBIG, DFA)
• Coins.ph offersasecure multi-cryptocurrency mobile wallet easily accessible via web and app
• instantly trade cryptocurrencies such as Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Ripple (XRP)
• Buy 8 types of game credits at 1:1 pricing
• Top-up your Coins.ph wallet funds through 7-Eleven CLiQQ, Palawan Pawnshop, TouchPay, GCash, and more
ONLINE PAYMENT OPTION FOR SHOPPING AND TRAVEL
• Pay your Philippine Airlines and AirAsia online bookings
• send money through wallet-to-wallet transfers
ပင်ဘဏ်အကောင့်မရှိဘဲ - Coins.ph သငျသညျ, ကြိုတင်ငွေဖြည့်ဝန်ကိုဝယ်မည်သူမဆိုငွေပို့ 95+ ဥပဒေကြမ်းများအပေါ်ပေးဆောင်, 200+ နိုင်ငံများတွင် & နယ်မြေများကနေငွေလွှဲလက်ခံရရှိရန်ခွင့်ပြုမယ့်မိုဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒင်္ဂါးပြားနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုသငျသညျအစဉျအမွဲလိုပါလိမ့်မယ်တစ်ခုတည်းသောပိုက်ဆံအိတ်ပါ!
အသစ်: 200+ နိုင်ငံကနေ Western Union မှတဆင့်ငွေလွှဲ
•အလွယ်တကူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 500,000+ တည်နေရာကနေငွေလွှဲပေးပို့
•သင့် Coins.ph ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာချက်ချင်းသင့်ရဲ့ရန်ပုံငွေတိုင်ကြားပါ
ကြိုတင်ငွေဖြည့် Load ဝယ်
•အလွယ်တကူ Coins.ph app ကို အသုံးပြု. အွန်လိုင်းဝန်ကိုဝယ်
•ကမ္ဘာလုံးသို့မဟုတ် TM အလိုအလျောက်နံပါတ်များ
•စမတ်သို့မဟုတ် TNT နံပါတ်များ
•သင်ဝန်ကိုဝယ်သည့်အခါ 10% ပြန်အမ်း Get
• 70+ အထူးနှုန်းများမှရွေးပါ - စာသား, ပဌနာ, ဒေတာနှင့်ရောနှောပြီးအထူးနှုန်းများ - အားလုံးအဓိကဖိလစ်ပိုင်ပံ့ပိုးပေးဘို့
•အလွယ်တကူလာမယ့်အချိန်ကို load ရန်သင့်အကြိုက်ဆုံးဂဏန်း Save
• 100+ ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနံပါတ်များအဘို့ကြိုတင်ငွေဖြည့်ဝန်ကိုဝယ်
• 200+ နိုင်ငံများတွင် 500,000+ တည်နေရာကနေ Western Union မှတစ်ဆင့်ငွေလွှဲပို့ပါ
•ဖိလစ်ပိုင်မဆိုအဓိကဘဏ်သို့မဟုတ် padala ငွေလွှဲစင်တာမှပိုက်ဆံ Send
•အဓိကဘဏ်များ (BPI, Metrobank, Landbank, BDO) 30+ မှရံပုံငွေလွှဲပြောင်း
• 5,000+ ငွေသားပစ်ကပ်တည်နေရာ (Cebuana Lhuillier, GCash, Palawan Express ကို)
ချက်ချင်း cardless ငွေသားထုတ် (လုံခြုံရေးဘဏ်များ၏ ATM) အတွက်• 450 ATM စက်
•တစ်အိမ်မှတစ်အိမ်ပေးပို့ (LBC Pesopak ထွက်လက်ငင်းငွေချေ)
•အ Coins.ph App ကိုမှတိုက်ရိုက်အွန်လိုင်းဥပဒေကြမ်းငွေပေးချေမှု Make
•လျှပ်စစ် (Meralco, KLOAD Kuryente ဝန်, VECO, Davao အလင်း, PALECO)
•ရေ (Maynilad, မနီလာရေ 30+ ပြည်နယ်ရေဥပဒေကြမ်းများ)
• Home ကိုခရက်ဒစ် (ချေးငွေငွေပေးချေမှု)
•ဆက်သွယ်ရေး (PLDT, ကမ္ဘာလုံး, Smart)
•အစိုးရ (NBI ပြောလေပံ့ပိုးမှုများကို, Pag-IBIG, DFA)
• Broadband (ဆန်းသစ်သောဆက်သွယ်ရေး, Inc, Smart Broadband, ကမ္ဘာလုံး Broadband)
• Cable ကို Channel ကို Provider (Cignal တီဗီ Postpaid, Cignal တီဗီ Prepaid, Sky Cable ကို)
• Credit Card ကိုဥပဒေကြမ်းများ (BPI, Metrobank, BDO, EastWest ဘဏ်)
• Tala ဖိလစ်ပိုင်ချေးငွေများ
ဖိလစ်ပိုင်• 80+ ကိုပိုမိုပေးချေသူ၏
•တစ်ဦး₱5ကိုပြန်သင်တစ်ဦးထူးခြားတဲ့ဥပဒေကြမ်းပေးဆောင်အခါတိုင်း Get
•သင်အပတ်တိုင်းပေးဆောင်တိုင်း5ထူးခြားတဲ့ဥပဒေကြမ်းများများအတွက်₱ 100 အရယူလိုက်ပါ
• Coins.ph က်ဘ်ဆိုက်နဲ့ app ကနေတဆင့်အလွယ်တကူလုံခြုံတဲ့ Multi-cryptocurrency မိုဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ်ကမ်းလှမ်း
•ချက်ချင်းထိုကဲ့သို့သော Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin ငွေ (BCH), ဂယက်ထ (XRP) အဖြစ် cryptocurrencies ကုန်သွယ်မှု
• cryptocurrency စျေးနှုန်းများအပေါ်အမှန်တကယ်အချိန် updates များကို Get
ဝယ်ယူ GAME CREDITS
• 1 မှာဂိမ်းခရက်ဒစ်၏ 8 အမျိုးအစားများကို Buy: 1 စျေးနှုန်း
• Razer PIN နံပါတ် (ယခင် zGold-MOLPoints)
• Garena shell
•အဆင့် Up ကို!
• EX ငွေ
• Battle.net လက်ဆောင်ကဒ် (Blizzard)
• WarpPortal (Ragnarok ခရီး)
• Top-up သင့်ရဲ့ Coins.ph ပိုက်ဆံအိတ်ရန်ပုံငွေများ, 7-Eleven CLiQQ, Palawan Pawnshop, TouchPay, GCash နှင့်ထို့ထက် ပို. တဆင့်
•သင့် Beep ကဒ် Load နှင့်သင့်ကဒ်ချိန်ခွင်လျှာစစ်ဆေး
Load EASYTRIP NLEX နှင့် Autosweep RFID SLEX ခွန်ကောက်
•သင့် EasyTrip NLEX ခွန်ကောက်အကောင့် Load
•သင့် Autosweep SLEX ခွန်ကောက်အကောင့် Load
ဆိုင်များနှင့်ခရီးသွားခြင်း FOR အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုစနစ်
•သင့် Shopee လှည်းများအတွက် Pay ကို
•သင့် Traveloka လေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့်ဟိုတယ်ဘွတ်ကင်းဘို့ Pay ကို
•သင့်ဖိလစ်ပိုင် Airlines နှင့်အဲအေးအွန်လိုင်းမှကြိုတင်စာရင်းသွင်း Pay
★★★ခုနှစ်တွင် Featured အမျှ★★★
အာရှရှိ Tech မှ
Coins.ph အဆက်အသွယ်အရေအတွက်ကို (02) 708-7087 နှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာ consumeraffairs@bsp.gov.ph အတူ Bangko Sentral ng Pilipinas နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်
Facebook မှာ: www.facebook.comcoinsph
Instagram ကို: https:instagram.comcoinsph
Coins.ph Wallet အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Coins.ph Wallet အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Coins.ph Wallet အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Coins.ph Wallet အား အခ်က္ျပပါ
Coins.ph Wallet ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Coins.ph Wallet အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.3.58
ထုတ်လုပ်သူ Coins Asia
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://coins.ph/privacy
App Name: Coins.ph Wallet
Release date: 2019-09-18 09:46:51
လက်မှတ် SHA1: 17:06:09:BA:C2:F7:1A:66:BB:2D:12:FB:40:F1:26:74:93:E9:9A:8E
အဖွဲ့အစည်း (O): Coins Asia
Coins.ph Wallet APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ